Ahịhịa ntụ ntụ
Ahịhịa nku anya
Ahịhịa nchara anya
ahịhịa nwere ike iweghachi
Ọcha ahịhịa etemeete
Eke/akpa etemeete ahịhịa ahịhịa
Ngwa ndị ọzọ etemeete/ihe ngwa ngwa
Ime palette Case
Nta nke mineral
Ntọala ahịhịa afụ ọnụ
Ejikọ ahịhịa afụ ọnụ
Ijikwa ahịhịa afụ ọnụ
Ngwa eji akpụ isi
Ịkpụ ntutu isi
Ncha na-akpụ isi/ude
Ịkpụ Ahịhịa Razor
Ahịhịa ajị agba
Afụ ọnụ Comb
Ngwakọta ntutu isi
Ndụmọdụ 5 iji nyere aka nhịahụ etemeete gị ka ọ dị ogologo oge ~
Na-asa ahịhịa gị mgbe niile "Ị kwesịrị ịsacha brọsh gị ọbụlagodi otu ugboro kwa ọnwa," Schlip na-ekwu. "Ọ dịkwa mkpa ịsacha brọsh gị ozugbo ịzụrụ ha iji wepụ kemịkalụ ọ bụla nwere ike na-ekpuchi bristles." Ọ na-akwado ịsacha brushes ejiri ezigbo ntutu mee ya na organic...
Ndụmọdụ maka ilekọta brushes etemeete gị
Kedu ihe ị ga-eji mee ka ha dị ọcha? Ncha ọdụ́ ma ọ bụ ncha ntutu nwa na-arụ ọrụ nke ọma maka ihicha brushes. Ọ bụrụ na ị na-eji ahịhịa eriri eke eke, ndị ọkachamara akpụkpọ anụ anyị nọ na Wilsonville kwadoro iji ncha ntutu nwa. Maka ihicha brushes etemeete mmiri mmiri, ncha ọdụ́ na-eme ka ọ bụrụ ikuku iji wepụ etemeete na e...
Ntuziaka maka ahịhịa etemeete ihu ~
Ọ dịghị ihe na-atọ anyị ụtọ nke ukwuu dị ka obi ụtọ nke brushes etemeete ihu ọhụrụ mgbe ha dị ọcha ma nwee bristles ndị ahụ dị nro. gbaghara anyị ka anyị na-akwa. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ma ọ bụ ghara ịkọrọ anyị otu ịnụ ọkụ n'obi maka ihe ịchọ mma, jide n'aka na anyị kpuchiri gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ahịhịa etemeete ọhụrụ ...
Ncha nhicha etemeete dị elu ~
Ncha anyị na-aga n'ihu: 1> Plat formula, anaghị emebi bristles. 2> Nhicha siri ike, nwere ike ihicha ahịhịa ahụ nke ọma 3> Ọnụ ahịa asọmpi karịa ndị ọzọ na-ebubata ma ọ bụrụ na-atụle otu àgwà ahụ. 4> Nwere ike ịnye akwụkwọ mmado ebipụta nkeonwe na elu na ala nke ncha ncha na obere co...
Otu esi ehicha brushes etemeete
Ọtụtụ ndị mmadụ anaghị ehicha brushes etemeete ha na sponge ha zuru oke, ụfọdụ ndị mmadụ anaghịkwa ehicha ha ma ọlị. Mana brushes etemeete ruru unyi nwere ike ịkpata ụdị ịdị ọcha na ahụike niile, site na otutu ruo na ọrịa E. coli. Ndị ọkachamara anyị na-akparịta ụka—gụnyere onye na-ahụ maka ọrịa akpụkpọ ahụ, onye na-eme ihe nchacha mma...
Usoro nke ime ahịhịa ịchọ mma
Na-ese onyinyo usoro nke brushes etemeete ejiri aka mee, N'ezie, ndị mmadụ amaghị ihe mere Japanese Hakuhodo makeup brushes ji dị oke ọnụ. brushes etemeete dị elu bụ nke ejiri aka mee ma nwee nnukwu ihe a chọrọ n'ọrụ nka - nke a bụ ihe kpatara o ji dị oke ọnụ. Ahịhịa etemeete dị elu ...
18 Atụmatụ ahịhịa etemeete maka njirimara gị
Ị nwere ahịhịa etemeete niile mara mma, mana ị maara ka esi eji ha? Ọtụtụ ụmụ nwanyị nwere ọ dịkarịa ala brushes etemeete ole na ole n'ime drawer ụlọ ịsa ahụ na akpa etemeete ha. Ma ị nwere nke ziri ezi? Ị makwa ka esi eji ha eme ihe? O yikarịrị ka azịza ya bụ ee e. Ojiji na nlekọta n'ozuzu 1 Streamlin...
ka esi etinye etemeete?
1. Malite na moisturizer. N'agbanyeghị ụdị akpụkpọ ahụ gị (akọrọ, mmanu mmanu, ma ọ bụ ngwakọta), ọ dị mkpa ka hydrate ma ụtụtụ na abalị-ma echefula sunscreen na am na-atụ aro ka ịsacha na toning (nke a dị mkpa karịsịa n'abalị!) Tupu itinye moisturizer. were moisturizer...
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti etemeete puff na mma blender?
Kedu ihe kpatara ị ga-eji họrọ sponge etemeete Dongshen na usoro etemeete gị? All Dongshen makeup sponge bụ ihe na-abụghị latex, nke nwere nnukwu nro na mmetụta bouncy. Dongshen makeup blender nwere ike inye gị ọmarịcha na ọbụna anya, yana ọ dabara maka ịchọ mma dị iche iche....
M ga-ebu ụzọ were ahịhịa ntọala ma ọ bụ buru ahịhịa concealer?
1. Nlekọta akpụkpọ tupu etemeete Tupu etemeete, ị ga-arụrịrị ọrụ nlekọta anụ ahụ kachasị mkpa tupu itinye etemeete. Mgbe ịsachara ihu gị, ọ ga-agba mmiri ma mee ka akpụkpọ ihu. Nke a bụ maka ihu igwe kpọrọ nkụ na-eme ka ntụ ntụ na-efunahụ ma mee ka etemeete dịkwuo nro. Wee tinye ude mgbochi...
Ị ma ihe ndị a na-akpachapụ anya n'ịkpụ isi?
Ihe mbụ: họrọ ịkpụ ntutu n'ụtụtụ ụtụtụ bụ oge kacha mma ịkpụ ntutu. N'oge ụra, n'ihi metabolism accelerated, sebaceous glands na-ezosi ike ike, nke na-eme ka ntutu na-eto ngwa ngwa. Mgbe abalị "na-ara ara" gasịrị, ụtụtụ bụ oge kacha mma iji "belata R ...
Kedu otu esi eji brush concealer iji zochie ntụpọ gị?
Ekwesịrị iji ahịhịa concealer mee ihe dịka ezigbo mkpa nke concealer siri dị. N'otu aka ahụ, ṅaa ntị na oge eji eme ihe, na n'aka nke ọzọ, ṅaa ntị na usoro eji eme ihe. Na ojiji a kapịrị ọnụ, a ga-ejiderịrị usoro ndị a. Nzọụkwụ 1: tupu itinye etemeete + sunscreen ...
Ị maara ka esi ejikwa brushes na-akpụ afụ ọnụ?
Ọtụtụ ndị ikom na-akpachapụ anya ga-eleghara nlekọta na ihicha brushes anya. N'ezie, ngwaahịa ndị dị otú ahụ na-akpọtụrụ akpụkpọ ahụ ozugbo kwesịrị ịṅa ntị na nlekọta na nhicha. Ya mere, taa, m ga-agwa gị banyere mmezi na ihicha nke ịkpụcha brushes. Ihe ọmụma metụtara ya, gent...
Kedu otu esi ahọrọ ahịhịa eyeliner ziri ezi?
site admin na 21-08-17
Mee ka ahịrị ahụ siri ike ma ọ bụ nke siri ike nke nku anya dọtara dị nro na nke okike. A na-eji ahịhịa eyeliner emezigharị ihe etemeete. Ndị ọkachamara n'ịchọ mma anaghị esiri ike na-ese nku anya niile, ọkachasị nku anya ala. Ụfọdụ anaghị agba agba ma na-eji naanị nku anya. Mgbe ụfọdụ mesie h...
Shijiazhuang Dongmei ahịhịa Co., Ltd. e guzobere na 1986. Ọ bụ etemeete ahịhịa & ajị ahịhịa n'ichepụta ụlọ ọrụ na integrating ahịa / imewe na mmepụta.
Anyị na-emepụta maka elu-edu etemeete brush & ajị ahịhịa ụdị OEM na mba ndị mepere emepe na Europe na United States, ma na-ahazi ODM mmepụta maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke obere, ọkara na nnukwu ahịa.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shijiazhuang Dongmei Brush Co., Ltd.
© Nwebiisinka - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa na-ekpo ọkụ, map saịtị
Ahịhịa ịchọ mma, Ngwá ọrụ brushes etemeete, Otu ahịhịa etemeete, Ọkpụkpọ etemeete dị nro, etemeete ahịhịa set, Mee elu brushes,